History & Culture Colonialism uye Imperialism
Musi waNovember 16, 1532, Atahualpa , ishe weInca Empire, akarwiswa ndokutorwa nevatongi veSpain pasi peFrancisco Pizarro. Pane imwe nguva yaakatorwa, vaSpanish vakamumanikidza kubhadhara rudzikinuro rwakakosha ruchiita matani endarama nesirivha. Kunyange zvazvo Atahualpa akabudisa rudzikinuro, vaSpanish vakamuuraya.
Atahualpa uye Inca Empire muna 1532:
Atahualpa yakanga iri kutonga Inca (izwi rakafanana rinoreva kuna Mambo kana Mambo) weInca Empire, yakatangira kubva kuColombia yanhasi kusvika kune zvikamu zveChile.
Baba vaAtahualpa, Huayna Capac, vakanga vafa nguva inenge yakapoteredza 1527: mugari wenhaka yake akaonekwa akafa panguva imwe chete, achikanda muUmambo hutsinye. Vaviri vevanakomana va Huayna Capac vakatanga kurwisana neUmambo : Atahualpa aitsigirwa naQuito uye nechokumaodzanyemba kweMambo uye Huáscar aitsigirwa neCuzco uye kumaodzanyemba kweMambo. Zvinonyanya kukosha, Atahualpa aiva nekutenda kwevatatu vakuru vakuru: Chulcuchima, Rumiñahui uye Quisquis. Mukutanga 1532 Huáscar akakundwa ndokutorwa uye Atahualpa aiva ishe weAndes.
Francisco Pizarro aiva musungwa akachengetedzwa uye mukunde uyo akanga aita basa guru mukukunda nekuongorora kwePanama. Akanga atova murume akapfuma muNyika Itsva, asi aidavira kuti kune hupfumi hwemadzinza ehupfumi kune imwe nzvimbo muSouth America inongomirira kupambwa. Akaronga marwendo matatu pamwe chete nePacific gungwa reSouth America pakati pe1525 ne1530.
Pafendo rwake rwechipiri, akasangana nevamiriri veInca Empire. Parwendo rwechitatu, akatevera nyaya dzeupfumi hwakawanda munyika, pakupedzisira achienda kuguta reKajamarca munaNovember 1532. Aive nevarume vanenge 160, pamwe chete nemabhiza, maoko uye mana mana.
Atahualpa yakaitika kuCajamarca, kwaainge akamirira hutapwa huáscar kuti aunzwe kwaari.
Akanzwa makuhwa eboka iri risinganzwisisiki revatorwa vekune dzimwe nyika vanoita nzira yavo mukati (kubata nokupamba sezvavakanga vachienda) asi iye zvechokwadi akanzwa akachengetedzeka, sezvo akanga akakombwa nemazana zviuru zvehondo veteran. Apo veSpanish vaisvika kuKajamarca musi waNovember 15, 1532, Atahualpa akabvuma kusangana navo zuva rinotevera. Munguva iyi, veSpain vakanga vazvionera ivo pfuma yeInca Empire uye nekusuwa kwakazvarwa nemakaro, vakasarudza kuedza kutora Mambo. Izvo sarudzo yakave yakashanda naHernán Cortés makore akapfuura muMexico.
Pizarro akanga atora taundi yeguta muKajamarca. Akaisa mahwendefa ake padenga uye akavanza vatasvi vake vemabhiza uye zvikwata zvemafuro muzvivako zvakakomberedza nzvimbo. Atahualpa akaita kuti vamirire musi wechigumi nematanhatu, achitora nguva yake kuti asvike kune vateereri vamambo. Pakupedzisira akazviratidza mumasikati makuru, akatakura marara uye akavakwa nevakawanda vainzi Inca vanokudzwa. Apo Atahualpa akaratidza, Pizarro akatumira Baba Vicente de Valverde kundosangana naye. Valverde akataura neInca kuburikidza nemuturikiri uye akamuratidza chikamu. Mushure mokunge mapepa achipfuura nepakati, Atahualpa akakurumidza kurasa bhuku racho pasi. Valverde, anofungidzirwa akatsamwa pachibayiro ichi, akadana vaSpain kuti varwise.
Pakarepo chikanda chakanga chakazara nevatasvi vemabhiza nevanofamba namakumbo, vachiuraya vagari uye vachirwisana nenzira yavo kuenda kumarara emadzimambo.
Varwi veInca nevakuru vakuru vakatorwa zvachose vakashamiswa. VaSpain vaiva nezvikwereti zvemauto zvakange zvisina kuzivikanwa muAndes. Vagari venyika vakanga vasati vamboona mabhiza vasati vasvika uye vakanga vasina kugadzirira kudzivisa vavengi vakadzika. Zvombo zveSpain zvakaita kuti zvive zvisingabviri kuzvidzora zvombo zvepanyika uye minondo yesimbi yakanyongedzwa nyore nyore kuburikidza nezvombo zvekuzvarwa. Iko kanamoni nemaskets, inodzingwa kubva padenga repamusoro, kunaya kunaya kwekutinhira uye kufa kunopinda muchikwereti. VaSpain vakarwa kwemaawa maviri, vachiuraya zviuru zvevanhu vomunharaunda, kusanganisira dzakawanda nhengo dzinokosha dzeInca. Vakatasvi vemabhiza vakatasva pasi vatiza vanhu vemunharaunda muminda yakakomberedza Cajamarca. Hapana muSpanish akaurayiwa mukurwisa uye Mambo Atahualpa akabatwa.
Apo imwe nhapwa Atahualpa yakaitwa kuti inzwisise mamiriro ake ezvinhu, akabvuma kurudzikinura mukutsinhana kwerusununguko rwake. Akapikira kuzadza imba huru kamwechete negoridhe uye kaviri kupfuura nesirivha uye veSpanish vakakurumidza kubvumirana. Nenguva isipi pfuma zhinji yakanga ichiunzwa kubva kumativi ose eUmambo, uye vaSpanish vane makaro vakaaputsa zvidimbu kuitira kuti imba yacho izadze zvishoma nezvishoma. Musi waJuly 26, 1533, zvisinei, veSpain vakatya nhepfenyuro yokuti Inca General Rumiñahui akanga ari pedyo uye vakauraya Atahualpa, inonzi inopandukira mukurudzira kupandukira vaSpanish. Rudzikinuro rwaAtahualpa rwakanga rwune ruzivo rwakakura : rwakakonzerwa kusvika kune zviuru gumi nezviviri zvegoridhe uye kaviri sirivha iyo yakawanda. Zvinosuruvarisa, zvizhinji zvepfuma iyi yaiva mumhando yemabasa anokosha eumhizha ayo akanyunguduka pasi.
Mushure mekutorwa kweAtahualpa:
VaSpain vakabata bhiza rakanaka pavakabata Atahualpa. Chokutanga, aive muKajamarca, iyo iri pedyo nechekugungwa: dai akanga ari kuCuzco kana Quito vaSpain vangadai vakave nenguva yakaoma kusvika ipapo uye Inca ingave yakarova pakutanga kune vanovhiringidza. Vagari vemuInca Empire vaitenda kuti mhuri yavo yeumambo yakanga yakafanana-yaMwari uye vaisazosimudza ruoko pamusoro peSpanish apo Atahualpa aiva musungwa wavo. Mwedzi inoverengeka yavakabata Atahualpa vakabvumira kuti veSpanish vatumire kuti vatsigire uye vauye kunzwisisa zvematongerwe enyika akaoma ehumambo.
Pane imwe nguva Atahualpa akaurayiwa, vaSpain vakakurumidza kuisa muchengeti wemapurisa panzvimbo yavo, achivabvumira kuti varambe vakabata simba.
Vakatarisawo kutanga kuCuzco ndokubva vaenda kuQuito, pakupedzisira vachiwana umambo. Nenguva iyo mumwe wevatongi vavo vechidiki, Manco Inca (mukoma waAtahualpa) akaziva kuti vaSpain vakanga vauya sevakakunda ndokutanga kupandukira zvakanga zvanyanyisa.
Paiva nemimwe migumisiro paSpain. Mushure mokunge kukundwa kwePeru kwakanga kwakakwana, vamwe vashanduri veSpain - kunyanya avo vainzi Bartolomé de las Casas - vakatanga kubvunza mibvunzo inotyisa pamusoro pekurwisa. Mushure mezvose, chakanga chiri kurwiswa kusingagadziriswi kune mambo akakodzera uye zvakaita kuti kuurayiwa kwezviuru zvevasina mhosva. IvaSpain vakazopedzisira vatsiura kurwisana kwemazamu ayo Atahualpa aiva muduku kudarika munin'ina wake Huáscar, iyo yakaita kuti ave munhu anonyengera. Izvi zvinofanira kuonekwa, zvisinei, kuti Inca haina kutenda kuti hama yakakura inofanira kubudirira kuna baba vake munyaya dzakadaro.
Kana vari vemunharaunda, kubatwa kweAtahualpa yaiva danho rokutanga mune kuparadzwa kwepedyo-dzimba dzemisha yavo netsika. NeAtahualpa neutralized (uye Huáscar akaurayiwa pamusoro pemurairo wehanzvadzi yake) pakanga pasina munhu wekumhanyira kune vasingadi vamuvengi. Rimwe chete Atahualpa rainge raenda, vaSpain vakakwanisa kutamba nharo dzenzira uye shungu kuitira kuti vagari vomunharaunda vabatane.
Nhoroondo yeTúpac Amaru
10 Nhau Nekukunda kweInca Empire
Latin America Nhoroondo: Mharidzo kuColonial Era
10 Mashoko Pamusoro paFrancisco Pizarro
Spain's American Colonies uye Encomienda System
Nhoroondo yeManco Inca (1516-1544): Mutongi weInca Empire
Bartolome de Las Casas, Defender weVaAmerica
Koreshi McCormick, Inventor yeRechaner Reaper
Nzira Yokugadzira Crystal Wand Quartz
Iyi Ford Mustang Pony Package ya2011
A Zvinyorwa zveThe Sleeping Beauty Ballet
Chytrid Fungus uye Frog Kukanganiswa
Chii chinonzi Frule paGolf Club, uye chii chayo inoshanda?
Kunyunyuta Nhoroondo - Domestication nekupararira kweAvocado Fruit
Unogona Kuwana Pepipoti yeUnited States Kana Iwe Wakava Nemitero Yakadzoka?
100 Vakadzi Vanonyanya Kukosha Munyika Yose
Dzidza Zvinoratidzira Conjugations zve "Sourire" (kuti Smile)
Ndezvipi Zvingagadzikana Zvine Chinhu Chine Uturu Hwakawanda?
Angel Energy Clearing: Nzira Yokusasa Nayo Nzira Dzemagetsi Kubva Pamba Pako
Zvaunofanira Kuziva Nezvekutangaa uye nei ichi chichimbwa
Zvaunofanira Kuziva Usati Wanyoresa paChikoro cheMutemo cheIndaneti
Chii Chinonzi Bootstrapping in Statistics?
Geology, History, uye Wildlife yeAppalachian Mountain Habitat
Kunaka & Creative Thinking
Best Children Books of Irish Folktales uye Fairy Tales
Abhigairi naDhavhidhi - Abhigairi aiva Mukadzi Wouchenjeri hwaMambo Dhavhidhi
Kuziva, Kuedza, Kuda, Kuti Ugare Wakanyarara
Zvimwe Zvikonzero Nei Usingafaniri Kufunga Nezvekutenga Pepa Rokutsvakurudza
Chii Chinogadzira Chikara Kupera?
Ndizvo Zvinyorwa uye Nhema Izvo?
'The Jungle' Mibvunzo Yokudzidza uye Kukurukurirana
Chidzidzo Chinofadza uye Chachigadzirira Zvirongwa zvePair Music neMat
Nhoroondo yeErnest Hemingway